Cetilistat poda yakasvibiswa kuti uwedzere kurasikirwa | AASraw steroid powder
/Blog/cetilistat/Cetilistat pfumbu yakakosha yekurasikirwa
Posted on 11 / 26 / 2017 by 阿斯劳 akanyora cetilistat. Izvo zvine 2 Comments.
Chii chinonzi Cetilistat / Cetilistat poda yakasvibirira?
Cetilistat poda yakasviba / Cetilistat mbishi chigadzirwa mushonga wakagadzirirwa kurapa kufutisa. Inoita nenzira imwecheteyo seyakakura mushonga orlistat poda nekudzivirira pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumatumbu. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva kuchikafu inodzivirirwa kubva kuhydrolyzed kupinda isingabatike yemahara emafuta acids uye yakanyururwa isina kugayaniswa. Mumiedzo yevanhu, cetilistat powder yakaratidzirwa kuburitsa hwakaenzana uremu kune orlistat. Izvo zvinoguma nekudzikira uremu uye inotora mafuta kubva kuchikafu. Mushonga uyu unoita pariperi kudzikisira chishuwo, pasina kukanganisa huropi.
zita Cetilistat, Cetilistat powder, Cetilistat poda powder
Melting Point 72-76 ° C
Colour Muchena kana kuti upi pfupa chena
Cetilistat pfumbu yakashata / Cetilistat effect
Kuwedzerwa dambudziko remazuva ano munyika dzakabudirira uye dzichiri kusimukira, uye ikozvino kuwandisa nekurema kunokonzera huwandu hwevakafa munyika yose kupfuura kuderera pasi. Cetilistat powder inonzi lipase inhibitor rudzi rwemishonga. Mishonga inoshanda nekuvhara maitiro emafuta mukati mezvokudya kuitira kuti iwe usaikuya uye mafuta asina kuvepwa achapfuura nemuviri mumudumbu. Iko capsules inofanira kushandiswa pamwe chete nekodori yakaderera, kudya kwemafuta kwakaderera uye chirongwa chakakodzera chekurovedza muviri kuporesa kuneta. Kuderedza koriori kudya uye kuyerwa kunogona kubatsira kudzivirira uye kubata zvirwere zvakadai sokukwirira kweklesterol, chirwere cheshuga, hypertension uye chirwere chemoyo.
Cetilistat mbiriso yakawanda yeupfu / Cetilistat dosage
Cetilistat powder inouya mu-capsule form uye mishonga yezvakanyorwa pane imwe neimwe 60mg. Endai kunoona chiremba wenyu musati mushandisa mushonga uyu wezano pamusoro pekugadzirisa uremu uye kuitira kuti chiyero chakanaka chiverengwe. Iko capsules inotorwa nemuromo uye inomedza yakazara negirazi remvura. Varwere vanowanzotaurirwa kuti vaitore nekafu kuitira kuti inogona kudzivirira chero mafuta ayo anodyiwa kuti arege kuwanikwa. Muzviitiko zvose, varwere vanofanira kuchengetedza zvakakwana regimiro yeiyo inopiwa nechiremba wavo uye vanoita kuti huwandu huwedzere husati hwadarika sezvo kuita izvi kungawedzera ngozi yemigumisiro.
Cetilistat pfumbu yakashata side effect / Cetilistat side effect
Kana Chestilistat pfumbu yakasvibiswa ichinyorwa, inogona kukonzera mimwe yechirungu sechiedza:
Cetilistat mbiriso yakakosha / Cetilistat kunyeverwa
Cetilistat pfumbu yakasviba inogona kukanganisa kunwa kwevamwe mavitamine ane mafuta uyewo mamwe marudzi emishonga.
Kushandisa zvakawanda zvezvokudya zvine mafuta akakwirira zvinogona kuwedzera njodzi yemigumisiro.
Kuwedzera kwepfupa yeVS Cetilistat powder
Nzira Yokuziva Zvose ZviriKetilistat (Cetislim) Powder For Weight Loss
Testosterone propionate powder: zvinobatsira uye nemigumisiro yaunofanira kuziva!	Vakadzi vanogona kutora Primobolan (Methenolone Acetate) here?